Lobikely, 6 taona Nongotana ny voamasony roa…
Omaly maraina no hita faty tao amin’ny sekolim-panjakana iray ao Antaninarenina Toliara, i Lôbikely,
zazalahy iray vao enin-taona monja raha nivoaka ny trano mba hilalao baolina no anton-diany ny Alahady hariva teo. Efa tsy nisy voamaso intsony izy nandritra izany ka rà avokoa no nivoaka tamin’ireo lavaka roa. Raha araka ny vaovao azo hatrany dia hatramin’ny 10 ora alina mbola nitady an’i Lôbikely tao amin’ilay tokontanin-tsekoly ihany ny Reniny raha tamin’ny 07 ora hariva no efa nody ireo namany. Tsy nahita na inona na inona anefa izy nandritra izany ka nampandre avy hatrany ny mpitandro ny filaminana. Omaly maraina niparitaka tao Toliara ny feo fa misy fatin-jazakely efa tsy nisy masony intsony hita ka fantatra avy hatrany fa i Lôbikely ilay notadiavin-dReniny izany. Miaina anaty tebiteby tanteraka vokatr’izany ireo Ray aman-dReny manan-janaka madinika ao Toliara. Manao antso avo amin’ny Fitondram-panjakana izy ireo mba hijery akaiky ny raharaha. Tsiahivina moa fa efa nisaraka ireo nahitan’i Lôbikely ka masoandro ka tao amin-dReniny izy no nipetraka.